ESI DEE EKWENTỊ GỊ NA HASHTAGS NA INSTAGRAM - INSTAGRAM - 2019
Esi tinye puthtags na Instagram
Instagram bụ ọrụ na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị, nke kachasị mkpa bụ ịkwalite obere snapshots ma ọ bụ vidiyo. Iji nye ndị ọrụ ọrụ ịchọta foto n'isiokwu gbasara mmasị, ụdị ọrụ bara uru dịka hehtag na-emejuputa. Banyere ya na isiokwu na a ga-atụle.
A hashtag bụ akara pụrụ iche nke post na Instagram, nke na-enye gị ohere ịmepụta foto nke otu ma ọ bụ karịa isiokwu iji mee ka ọchụchọ ahụ maka onwe gị ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ dị na njirimara mmasị.
Kedu ihe bụ hashtags maka
Ojiji nke havehtags bụ nnọọ ebe sara mbara. Ndị a bụ naanị ihe atụ ole na ole ha ji eme ihe:
Nkwalite peeji. E nwere oke nchịkọta ndepụta nke mkpado a na-eji iji kwado ibe gị, ya bụ, iji nweta mmasị na ndị debanyere aha ọhụrụ.
Kọọ foto gị onwe gị. Dịka ọmụmaatụ, profaịlụ gị nwere ihe karịrị 500 eserese foto, nke bụ foto nke pọọsụ gị kachasị mma. Ọ bụrụ na ị kenyere otu hashtag ahụ pụrụ iche na ihe oyiyi na pusi, nke onye ọrụ ọ bụla ejibeghị ya, mgbe ị pịa ya, ị ga-ahụ ihe oyiyi kachasị amasị gị. Ya mere, ị nwere ike idozi foto gị niile site na ọba.
Ahịa ngwaahịa. Ọtụtụ mgbe, a na-eji profaịlụ profaịlụ eji maka nzube azụmahịa ịchọta ndị ahịa ọhụrụ. Iji nwee ike ịmatakwu ndị ọkachamara banyere gị, ịkwesịrị ịtọ ndọtị maka nchọpụta nwere ike. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-etinye aka na nkedo, ọ bụrụ na ị na-etinye aka na mkpado dị ka "manicure", "gel_lak", "mbọ", "design_ ntu", "shellac" na ihe ndị ọzọ.
Soro na asọmpi. Instagram na-enwekarị asọmpi, ihe kachasị mkpa, dị ka usoro, na-agụnye ịtọgharị ma ọ bụ bipụta otu foto ma gbakwunye ya na hashtag nyere.
Chọọ maka ọrụ mmasị. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ ndị ọchụnta ego na òtù niile nwere akwụkwọ nke ha na Instagram, ebe ị nwere ike soro foto ngwaahịa ma ọ bụ nsonaazụ ọrụ, nkọwa ndị ọrụ na ozi ndị ọzọ dị mma.
Esi tinye hashtags
Ide ihe ederede di mfe. Iji mee nke a, mgbe ị na-ebipụta foto, na-agbakwụnye nkọwa ya, ma ọ bụ naanị mgbe ị na-abanye otu okwu, ị ga-etinye ya "#" ma soro okwu hashtag. Mgbe ị banyere, tụlee isi ihe ndị a:
A ghaghị edekọ mkpado ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye okwu abụọ ma ọ bụ karịa na hashtag, ị nwere ike dee ha ọnụ ma ọ bụ tinye ihe na-emesi ike n'etiti okwu, dịka ọmụmaatụ, "Tatumaster" ma ọ bụ "tattoo_master";
Na mkpado enweghị ike iji ihe odide. Nke a na-emetụta ihe odide dị ka akara mkpu, ogwe, akara akara na ihe ndị yiri ya, nakwa emoticons emoji. Ihe ndị ahụ na-adabere na ọnụ ọgụgụ;
A pụrụ ide edemede ahụ n'asụsụ ọ bụla. Ị nwere ike iji mkpado na English, Russian na asụsụ ọ bụla;
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke havehtags ị nwere ike ịhapụ n'okpuru foto ahụ bụ nke a na-ahọrọ na mkpụrụ ego 30;
Ịhapụ mkpado na oghere bụ nhọrọ, mana akwadoro.
N'ezie, mgbe ị bipụtara foto ma ọ bụ ikwu okwu na ya, a ga-etinye aka na ngwa ngwa.
Kedu otu esi ahọpụta onhtags?
Usoro 1: onwe
Usoro kachasị oge ga-achọ ka i chee echiche ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọtụtụ mkpado iji chọpụta.
Usoro 2: site n'Ịntanet
Ịbanye na nyocha ọ bụla "Achọpụta ihe dị mma", nsonaazụ ga-egosipụta nnukwu ndepụta nke ihe onwunwe na ndepụta dị njikere ndepụta. Dịka ọmụmaatụ, iji njikọ a na ebe nrụọrụ weebụ InstaTag, ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime isiokwu ndị a tụrụ aro ma nweta oke nchịkọta aha maka ya.
Usoro nke 3: iji ọrụ nhọta hashtag
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa ndepụta nke mkpado na otu isiokwu, mgbe ahụ, n'ọnọdụ dị otú a, a ga-enwe ọrụ pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, jiri ọrụ ntanetị RiteTag, maka isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu ị nwere ike ịchọta ndepụta dịgasị iche iche nke mkpado na ọrụ nke ọkwa ọ bụla. Dabere na ọkwa ị nwere ike ịhọrọ mkpado kachasị achọ.
Isi okwu nke hashtags bụ ihe na-adọrọ mmasị, ekwesịghịkwa ileghara ya anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme akwukwo Instagram a ma ama.